ढुक्क हुनुस्, तरकारी र फलफूलबाट कोरोना सर्दैन – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/ढुक्क हुनुस्, तरकारी र फलफूलबाट कोरोना सर्दैन
डा. मतिना जोशी वैद्य,विश्व यतिबेला कोरोनाको महासंकटसँग जुधिरहेको छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन र हामीले बन्दाबन्दीको दुई महिना पार गरिसकेका छौं । यस्तो अवस्थामा पनि बाँच्नका लागि खाद्य वस्तुको उपभोग त गर्नैपर्छ । कोरोना त्रासका बीच खाद्य वस्तुको आपूर्ति शृङ्खलाका बारेमा विभिन्न खाले सवालहरू यतिबेला उठेका छन् ।
डर त्यागौँ, आफ्नो र परिवारको स्वच्छता अपनाऔं, समुदायमा सचेतना फैलाऔं‌, फलफूल र तरकारीको ढुवानी, बिक्रीवितरण तथा प्रयोगलाई सुरक्षित बनाऔँ । (खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकी महानिर्देशक एवं खाद्य विज्ञ डा. वैद्यसँग गरिएको वार्तामा आधारित)
महोत्तरीमा खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर २ बालिकाको मृत्यु